अभिनेत्री, निर्देशक तथा निर्मात्री रेखा थापा पछिल्लो समय के गर्दैछिन् ? कहाँ व्यस्त छिन् ? कसैलाई थाहा छैन । उनी अभिनित कुनै चलचित्र प्रदर्शनमा आएका पनि छैनन् । कुनै चलचित्रको छायांकनमा पनि उनको व्यस्तता देखिएको छैन । दैनिक विभिन्न किसिमका स्ट्याटस आउने उनको फेसबुकबाट आजभोली खासै केहि पोस्ट भएको पनि छैन । आखिर रेखा गुमनाम किसिमले के गर्दैछिन् ? धेरैका लागि चासो हुन सक्छ । उनी निकट स्रोतका अनुसार रेखा नयाँ चलचित्रको तयारीमा जुटेकी छन् । उनले आगामी वैशाखदेखि होम प्रोडक्सनबाट निर्माण हुने चलचित्रको छायांकन सु...
पुरुषविरुद्ध होइन्, पुरुषलाई पनि पीडा छः रेखा थापा
काठमाडौं, २४ फागुन । चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले कमजोर महिलाको पति, बुवा, भाई वा प्रेमी सबै कमजोर हुने बताएकी छिन् । ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै रेखाले पुरुषहरुले पाएको दुःख घटाउन घरभित्र योद्धा छोरी जन्मिनु पर्ने बताएकी हुन् । पुरुषको बिरुद्ध होइन्, पुरुषलाई पनि पीडा भएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । उनले […]
रेखा थापा पराजित गर्दै कुन्ती शाही महामन्त्रीमा निर्वाचित
काठमाडौं : राप्रपाको महिला महामन्त्रीमा कुन्ती कुमारी शाही विजयी भएकी छन्।कमल थापाको समूहबाट उनी महामन्त्रीमा पदमा निर्वाचित भएकी हुन्। अध्यक्षमा निर्वाचित राजेन्द्र लिङ्देनको समूहबाट महामन्त्री पदमा उठेकी रेखा थापा भने पराजित भएकी छन्।शाहीले २ हजार ५ मत ल्याइन् भने थापाले १६४० मत प्राप्त गरिन्।
काठमाडौँ- कलाकार रेखा थापा कुन पार्टीमा आवद्ध छिन् भन्ने चासो बढिरहेका बेला उनी राप्रपामै रहेको संकेत दिएकी छन् । बिहीबार राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेद्वारी घोषणा गरे । उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा सहभागी भएर रेखाले आफू लिङ्देनको पक्षमा रहेको सन्देश दिएकी छन् । अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई टक्कर दिँदै युवा नेताहरूको […]
कलाकार सधै सिकारु हुन्छन्, ‘महानायक–महानायिका’कोे बहस बेकार छः रेखा थापा
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक दशक भन्दा लामो समय राज गरेकी नायिका हुन्, रेखा थापा । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा रेखालाई नायकको भन्दा पनि शक्तिशाली स्टारडम भएको कलाकारको रुपमा चिनिन्छ । उनै, रेखा थापा केही बर्षदेखि भने सुस्ताएकी छिन् । नयाँ चलचित्रको तयारीमा रहेकी रेखाले आउँदो बर्षको दशैंमा नयाँ चलचित्र दर्शकमाझ ल्याउने आशा व्यक्त गरिन् । नेपाली […]
सडकका बेबारिसे कुकुरको सेवामा रेखा थापा
काठमाडौं। अभिनेत्री रेखा थापा सडकका छाडा कुकुरलाई खाना खुवाउन निस्किएकी छिन्। स्नेह केयरसँगको समन्वयमा उनले सडकका छाडा कुकुरलाई खाना खुवाएकी हुन्। उनले लेखेकी छिन्, ‘यो संसार हामी सबैको साझा घर हो। मिलेर बाँच्न चाहने हो भने धर्तिका कुनै प्राणी भोको बस्नु गर्दैन्थ्यो। प्रकृतिका हरेक हिस्सालाई बराबर हक छ, आफ्नो यो साझा घरमा। स्नेह र स्वार्थमा सायद यही भिन्नता छ।’